Sidee gacan loogu cusbooneysiiyaa Kindle-keena | Dhamaan Akhristayaasha
Joaquin Garcia | | Amazon shidin, Akhristayaasha, Software, Casharrada shidan
Tani waa hage kooban oo loogu talagalay cusbooneysiinta qalabka Kindle. Labadaba Todo eReaders iyo anigu ma daryeelo waxa ku dhici kara qalabkaaga. Kahor intaadan wax sameyn, akhri tilmaamaha oo dhan ka dibna dib u eeg. Horraantii toddobaadkan, Amazon waxay soo saartay cusbooneysiin ku saabsan qalabkeeda waxaa ka mid ahaa ku darista 'Goodreads' eReader. Tilmaamuhu wuxuu ku habboon yahay aalad kasta oo shidan, maaddaama rakibidda gacanta ee eReaders iyo kiniiniyada labadaba loo sameeyo si isku mid ah. Kahor intaadan sii wadin tilmaamaha, waxaan kuu sheegayaa inaan ku sameeyay cusbooneysiinta gacanta dabka aan shiday oo ay i siisay qalad. Waxaan si gaar ah isku dayay rakibi nooca 11.3.1 taas oo ah mida ay kujirto iskudhafka Goodreads. Nasiib wanaagse, rakibistu wax isbadal ah oo weyn kuma sameyn qalabkeyga iyo waliba dib u dajiso Way kufilanayd in dib loogu celiyo hawlgalkiisa, laakiin waajibkaygu waa inaan laxiriirno si aad u ogaatid.
Maxaan uga baahanahay cusbooneysiinta gacanta
Qalab shidan ayaa lagu soo oogay 100% batari.
Fiilo USB ah oo lagula xiriiro Kindle-ka kombiyuutarka.
Darawallada ayaa si sax ah ugu rakibay PC si ay u aqoonsadaan Kindle.
Waxa ugu horreeya waa in la helo Shidh leh 100% batari, Macno malahan waxa shidan yahay iyo haddii aan qaadaneyno waqti dheer iyo in kale. Haddii ay jirto cilad koronto, Kindle waxaa loo daayay sidii leben, sidaa darteed waa muhiim in batteriga laga helo 100%, nabadgelyo ahaan. Markaan xaqiijinno shuruuddan, waxaa lagama maarmaan ah in kumbuyuutarradeena uu la xiriiro Kindle, taas oo ah, markaan isku xirno Kindle, wuxuu u aqrin doonaa pc inuu yahay hal unug oo keyd ah, oo ka hooseeya darawallada adag ee kiiska Windows. Sababtaas awgeed, waxaa lagama maarmaan ah inaad haysatid darawallada Amazon rakibay. Hadaadan haysan iyaga, waad awoodaa ka soo dejiso xiriiriyahan.
Marka aan helno shuruudaha kor ku xusan, waan sameyn doonnaa shabakadan waxaanan eegeynaa nooca ugu dambeeya ee Software-ka. Arinta Warqad shidan waa 5.4.2 dabka shidanna waa 11.3.1. Haddii aan haysanno noocyadan, ma cusbooneysiin karno maadaama ay yihiin noocyadii ugu dambeeyay. Haddii aan haysanno noocyada hoose, taas oo ah tan ugu badan ee caadiga ah, waan sii wadi karnaa cusbooneysiinta Kindle.
Laakiin sidee baan ku ogaan karaa nooca uu yahay Kindle-kayga?
Si aan u ogaanno nooca aan haysanno, waxaannu ku socon doonnaa Dulkeenna meeniska «Qalabka»Ka soo baxa menu-yaasha Kindle oo raadi ikhtiyaarka«ku saabsan»Marka laga hadlayo Dabka shidan, waxaa laga helaa xulashada«dheeraad ah»Laga soo bilaabo baarka sare. Qaybta ku xigta waxaad ka heli doontaa badhan oranaya «Cusboonaysii shidida»Keebaa naafo ah, yacni, waxaannu riixnaa wixii aan riixno waxba ma qabanayso. Badhankaani waa muhiim maxaa yeelay gadaal baa laga shaqeyn doonaa.
Marka aan xaqiijinno inaan u baahannahay cusbooneysiinta, waxaan tagnaa shabakadan oo waxaan soo dejisanaa xirmada cusbooneysiinta, waxaan soo dejineynaa mid u dhiganta qaabkeenna. Hadda oo aan haysanno xirmo cusbooneysiin ah, ayaan nuqul ka qaadnaa oo ku dhajino galka «Kaydinta Gudaha»Kindle-keena, waxaan tan ku sameeynaa PC, iyadoo Kindle-ka lagu xirayo xarig. Markii aan dhammeyno koobiyeynta xirmada cusbooneysiinta waxaan sii deyneynaa fiilada oo waxaan qabannaa Kindle oo keliya. Hadda waxaan tagnaa shaashadda halkaasoo naloogu sheegay nooca aan rakibnay oo aan arki doonno in «Cusboonaysii shidida»Hada wuu shaqeysan yahay oo si fiican ayuu u shaqeeyaa, sidaan u cadaadinayno rakiibkuna wuu bilaabmi doonaa.
Intii lagu gudajiray howshan qalabka shidan wuxuu dib u bilaabi doonaa dhowr jeer, ha walwelin, waxaa laga yaabaa inuu ku siiyo khalad, sida aniga igu dhacday, xalka waxaa sheegaya aaladda lafteeda, laakiin wixii aan sameeyay ayaa ahaa inaan xiro shubka oo aan dib u laabto si aad u daarto, dhammaantoodna ka soo baxa badhanka dabka. Haddii aanad helin qalad, hambalyo, waxaad horey u haysataa cusboonaysiinta cusub ee diyaar u ah inay socoto. Si aad u dhamayso, waxay kuu sheegaysaa in cusbooneysiintan gacanta lagu sameeyay xirmooyinka rasmiga ah ee Amazon, sidaa darteed haddii aan leenahay Kindle-keena xididaysan, gaar ahaan marka laga hadlayo Dabka Shidaalka, qalabkeennu wuu waayi doonaa xididkaas ka dib cusbooneysiinta gacanta. Markaa ka fikir intaadan cusbooneysiin sameyn haddii aad u maleyneyso inay kugu habboon tahay iyo in kale. Oh jidka ag fadhida, haddii aad wax su'aalo ah ka qabtid casharka ama kaliya ayaa la cusbooneysiiyay, ka faallo maqaalka, way ku caawinaysaa.
Macluumaad dheeraad ah - Goodreads xaqiiqdii wuxuu ku biirayaa qoyska Kindle, Xda-Horumariyayaal,
Wadada buuxda ee maqaalka: Dhammaan akhristayaasha » shirkadaha » Amazon shidin » Sida loogu cusbooneysiiyo Kindle-keena gacanta
Akhristayaasha ugu fiican
Ka faa'iideyso fursadda oo ka hel qaar ka mid ah eReaders ugu fiican suuqa qiimo aad u soo jiidasho leh
Meel shidanPaperle KindleNooca Cagaarka
Waraaqda shidan ee jiilkii ugu horreeyay kuma darto akhrinta wanaagsan, waxaan cusbooneysiiyay tayda usbuuc ka hor wax la mid ahna ma muuqdaan. Nooca ugu dambeeyay ee jiilka 1aad KP waa 5.3.9 🙁
Miina waa mid ka mid ah kuwa cusub oo astaamaha 'goodreads' ma muuqdaan, adeeggan ma wuxuu u noqon doonaa noocyada Mareykanka?
Waxaan hayaa nooca Mareykanka oo cusboonaysiinta ugu dambaysa ee i tuurtaa waa 5.3.9
Weli iskuma dayin inaan cusbooneysiiyo laakiin waxaan aqriyay in Goodreads uu kaliya ka shaqeeyo Mareykanka.
Waad salaaman tihiin dhamaantiin. Xiriirinta maqaalka waa nooca Mareykanka, laakiin runti dhib malahan, nidaamku wuxuu lamid yahay kan taleefoonada gacanta, feylka ayaa la geliyay qalabkana waxaa loo sheegay inuu soo raro. Waxa aan macno lahayn waa arrinta ku saabsan noocyada, waa inaad aragtaa in qalabkaagu yahay nooc ka hooseeya ugu yaraan kan ay Amazon dhigayso degelkeeda. Waqtigan xaadirka ah ayaa lagu dhawaaqay cusbooneysiinta Naarta cusub, ee loogu talagalay Kindle Paperwhite 2013 iyo jiilka 2aad ee Kindle Fire, in kasta oo kan aan isku dayay oo cusbooneysiintu ay qalad bixinayso. Inta soo hartay waxaan ku qanacsanahay in cusbooneysiintu soo bixi doonto laakiin ma garanayo goorta, suurtagal ahaan inay horeyba u jirtay ama ilaa qalabka soo socda la bilaabayo, kan maahan, kan kaliya ee Amazon ogyahay. Waan ka xumahay inaan awoodin inaan noqdo mid gaar ah, waxaan jeclaan lahaa. Oh iyo mahadsanid aqrinta iyo daba-galkaaga.
Jawaab ku sii Joaquín García
Qaabka Mareykanka, maxaad dhihi doontaa haddii akhrinta wanaagsan ay socoto?
Waxaan dhawaan iibsaday jiilkii 2aad ee Kindel, oo ay ka madhnayd astaanta guluubka yar, kaas oo loo isticmaalo in lagu iftiimiyo shaashadda isla markaana lagu cabbiro heerka iftiinka. Waxaan sameeyay wax walba oo aan awoodo anigoon ka soo kaban astaantaas, cusboonaysiinta, dib u kicinta, dib u dejinta; xaalad kasta illaa lix jeer. La'aantaas adeegsiga ah la'aantiis akhristaha lama isticmaali karo, indhaha ayuu ka daalaa oo habeenkii waxba ma tarto. Midkiina, aqoonyahannada, ma i caawin karaa ???? Mahadsanid
Ku jawaab Elias
My whitewhite cusub (2015) wuxuu soo bandhigayaa Akhris Wanaagsan. Kuwa kale kuma jiraan.
Shaqeeya. Sida aad ku qeexday tilmaamaha, cusbooneysiinta waxaa lagu dhammeeyay tallaabooyin aad u fudud, mahadsanid. "Kindle Paperwhite (Jiilka 6aad) ayaa loo keenay nooca 5.6.5"
an ayo dijo
Miyaa horeyba loo ogaa haddii akhrinta wanaagsan lagu dari karo jiilka koowaad Kindle paperwhite (2012) oo laga iibsaday Spain? Waxaan isku dayay inaan cusbooneysiiyo softiweerka Kindle-gaaga sida aad sheegto mana shaqeynayo. Mahadsanid!
Jawaab Ane Ayo
Gerardo Durand dijo
amazon ayaa ii soo dirtay emayl tilmaamaya cusbooneysiinta otomaatikada ee shidalka, ma aqaano waxa dhacay, waxaan haystaa laba maalmood oo ku xiran pc-ka waxayna ku muuqataa dabka «fadlan sug inyar inta dabku kuu bilaabmayo» iyo in ka badan laba maalmood soo maray, Maxaan sameyn karaa?
Jawaab gerardo durand
Sideen ku sameeyaa kuweyga oo aan u leeyahay nooca 2.5.3?
Ku jawaab Romy
Waad salaaman tahay, waxaan hayaa nal 2.5.8 oo taxane ah oo ka bilaabmaya b009… Waxaan nuqul ka dhigayaa cusbooneysiinta faylka .bin, waxaan sameeyaa dhammaan tillaabooyinka, laakiin marna ma awoodo ikhtiyaarka ah «cusbooneysii noocaaga».
Xaqiiqdii, markii aan dib ugula xiriiro USB-ga waxaan arkaa in dabkaas tirtiray feylkii .bin
Talo bixin kasta oo arrintan ku saabsan?
Tabus Tablet oo ka yar € 80, oo ah kiniin xiise leh oo la akhriyo
Woxter Scriba 190 Pearl, oo ah eReader ugu dhaqsaha badan suuqa